Mari dzeMudyandigere dzeVaimbove Vashandi veKanzuru yeHarare Dzonetsa Kuwana
Gumiguru 13, 2018
ex HCC worker
Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere vanoti vari kuda kunoona mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuitira kuti vabatsirwe kugadzirisa dambudziko ravakatarisana naro rekusapihwa mari dzavo.
Vanhu ava vanoti vari pamudyandigere, asi hapana mari yavari kuwana kubva kuLocal Authorities Pension Fund, iyo inobata mari dzemudyandigere dzevashandi vekanzuru.
Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero, izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzuru.
Mumwe wevanhu ava, VaDennis Mpezeni, vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga hupenyu hwavo zvakanaka.
VaMpezeni vanoti kwakatombouya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi, asi ivo vasina mari yepamudyandigere yavari kupihwa.
Mumwe mugari, VaAnselm Midzi, vanoti kanzuru yeHarare yakatyora kodzero dzavo nokuti yakavasiiswa basa vasvitsa makore makumi matanhatu chete, asi mutemo uchiti munhu anoenda pamudyandigere kana asvitsa makore makumi matanhatu nemashanu.
Kubva zvavaendeswa pamudyandigere, VaIgnatius Sanyika vanotiwo vakapiwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa tsviyo, asi mari iyi
Mutauriri weHarare City Council, VaMichael Chideme, vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo, asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa.
Meya weHarare, Va Herbert Gomba, vanoti LAPF ndiyo inofanira kujekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo nokuti mari yavo iri kutobereka iri ikoko, kwete kukanzuru.
Asi mukuru weLocal Authorities Pension Fund, VaCharles Mandizvidza, vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rokusabhadhara vanhu vari pamudyandigere nenguva nokuti makanzuru ese zvawo emuZimbabwe, haasi kubhadhara mari sezvaaisimboita kare.
VaMandizvidza vanoti makanzuru emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora, uye kanzuru yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhare mari dzevanhu dzemudyandigere.
Vakafanobata chigaro chemukuru weInsurance and Pensions Commission, VaBlessmore Kazengura, vanoti ichokwadi kuti vashandi vari pamudyandigere havasi kutambira mari dzavo kubva kuLAPF.
VaKazengura vanoti makambani anobata mari dzepenjeni ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora, iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi venenge vave pamudyandigere.
Asi vari pamudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana naVaMnangagwa kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe.